मगरको ज्वाँई - Setoparewa Setoparewa
जेठ ३० गते २०७४
- शुभ पाण्डे , पोखरा
“ मगरको ज्वाँई ” प्रसङ्ग मैले स्कूल पढाउने समयको हो । अहिले धेरै ठाउमा स्कूल खुलेका छन् । त्यस समयमा हाइस्कूल हाम्रो गाउँमा मात्र थियो । अर्थात यसका वरिपरि ३ कोशसम्म स्कूल थिएनन् । त्यहाँका पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु त्यहीँ आउँथे ।हाम्रो गाउँ भन्दा अलि माथि मगर गाउँ छ । उनीहरुको सवैभन्दा नजिकको स्कूल भनेको त्यही नै थियो । त्यहाका कतिपय विद्यार्थीहरु दिनको तीनघण्टसम्म हिडेर स्कूल आउने जाने गर्थे भने केही त्यही पनि बस्थे । स्कूलले छात्राहरुलाई छात्रबास राखिदिएको थियो । खास गरी टाढाका छात्राहरु त्यही बस्थे । तीमध्ये एउटीको नाम साइली थियो । स्कूलको नाम त लोना मगर हो तर सवैले साइली नै भन्थे । रिष्टपुष्ट एवम् छरितो स्वभावकी साइली कक्षा नौमा पढ्थी । राम्री थिई ।
स्कूलमा म्याथ साइन्स पढाउने सर थिए । उनलाई सवैले निहुरे सर भन्थे । उनले एकदिन भने “जनजाति खासगरी मगर जातिका केटीहरु रिष्टपुष्ट रसिला पोटिला आकर्षक हुुन्छन् । तर बूढी भए पछि कति खिङ्ग्रिङ्ग बन्छन् किन होला” ? मैले भने “बूढो भए पछि सवैजात त्यस्तै हो । केही सफासुग्घर रहन्छन् र आलि विशेक देखिने हो नत्र केही फरक छैन” । मैले माइली नेवार्नी र सिरिनाघरे वाहुनीको उदाहरण पनि दिए । ती आधा दाँत नभएका साहै नराम्रा थिए । साइलीका बाबु भूपू ईण्डियन सैनिक थिए । साइली उतै जन्मेकी हुदा सवैले लैन छोकडी भन्थे । त्यसो त त्यहा पढ्ने मगरनी ५ वटी केटीहरु मध्ये ३वटी लाहुरेका छोरी थिए भने दुईवटी मुुखियाका । स्कूलका केही शिक्षकहरुले टिउसन पनि पढाउथे । त्यसमा निहुरे सरको नाम एक नम्वरमा आउँथ्यो । सधैंँ जसो ट्यूसन पढ्ने समुहमा ती ५वटी मगर छात्राहरु पनि थिए । यसै सिलसिलामा निहुरे सर साइलीतिर आकर्षित भएछन् । एकदिन निहुरे सरले ढकाल सरसँग भन्दै थिए मलाई साइली असाध्यै मन पर्छ । विवाह गर्नु पछ की क्या हो ? ढकालले भने “त्यति सजिलो छ र ? तिमीहरुको जात र संस्कृति मिल्दैन। यिनीहरुको बाबु आमा र केटीको सहमति भएन भने पछि पनि केटी फर्काउने मगरको चलन हुन्छ । मगरहरुले घरमा आइ पर्ने कठिन कामहरु ज्वाँईलाई गर्न लगाउछन् । कतिपय त ससुरालीको घरमा गोठालो बसेका हुन्छन् । तपाइको घरमा पनि त समस्या होला” । निहुरेले कम्युनिष्टका नेताले जस्तै शैलीमा भने जातभन्ने कुरा त्यति जटिल होइन मान्छेको जात एउटै हो थपे विवाह पछि जायजात हुने जति सवै एउटै जात हो । यो नहुने जति भिन्न जात हो यो पशु पंक्षीमा पनि हुन्छ । जहासम्म संस्कृतिको कुरा छ त्यसमा त्यति समस्या छैन । जाडरक्सी,सुगुर म पनि खान्छु । नाचगान मलाई पनि आउछ । उनीहरुले धामी झाक्री आदि मानेजस्तै हामीले पनि भगेर, झाक्री आदि मान्दै आएका छौ । सवैले काल्पनिक देवता मान्छौ , पूजा गर्दछौ । सवैका धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक परम्पराहरु अन्धविश्वासमा नै आधारित छन् ।जहासम्म सहमतिको कुरा छ त्यसका गन्धवविवार्ह लगायतका धेरै उपायहरु छन् । घरका वारेमा पनि त्यति समस्या छैन । बाबुले कान्छो भाइलाई असाद्धै माया गर्दछन् उसैसग बस्छन् । ज्वाँईलाई काम गराउने गाउकाहरुलाई हो म जस्ता जागिर खानेलाई होइन । मैले उनीहरुका कुरा बाहिरैबाट सुनेको एकमहिना पछि साइली र निउरेको विवाह भएछ । उनीहरु सँगै बस्न थालेछन् । विवाह उपलक्ष्यमा हामी स्टाफहरुलाई निहुरेसरले एकदिन राम्रो खाजा पनि खुवाए । त्यसैै दिन थाहा भयो विवाह गर्ने कुरा उठ्दा साइलीका बाबुले दुईवटा सर्त राखेका रहेछन् । एउटा साइलीले खुसी भएर स्वीकार गर्नुपर्ने, अर्को चाही उनका घरमा हुने सास्कृतिक कार्यक्रममा ज्वाँई सहभागी हुनु पर्ने । साइलीले सरले भने पछि मान्छु भनि रे । माइती मान्न सुँगुर रक्सी ,रोटी आदि चाहिने हुदा पछि उतै मगर गाउबाट लिएर नाजे कुरा भएको रहेछ । केही समय पछिको कुरा हो मगरगाउका सवै अरु जात जाति र दलितहरु समेत पाका मानिसहरुले निहुरेसरलाई ज्वाँई भन्न थाले भने सानाकेटाकेटीहरुले भिनाजु । यसमा ज्वाँई भन्नेहरु अत्यधिक थिए । हुन त साइलीहरु ६ बहिनी थिए । कान्छी वाहेक सवैको विवाह गाउका मगरसँगै भएको थियो । उनीहरुलाई आफ्ना ससुरालीले वाहेक ज्वाँई भान्जा भन्दैनथे । जेठो माइलो कान्छो वा नामले बोलाउथे तर निहुरेलाई सवैले ज्वाँई भन्थे । भन्ने मात्र नभएर बढो सम्मान गर्थे । सवैले बोलाउथे । पछिपछि त गाउलेले उनको नाम नै मगरको ज्वाँई राखेको थिए । यसमा निहुरे सर खुसि नै थिए । मगरका चाडहरु भदौरे,कात्तिके आदिमा विदा लिएरै जान्थे । फर्केर आए पछि निकै खुृसी देखिन्थे । लाहुरे मगरका छोरा थिएनन् । उनका अरु ज्वाँईहरुले पनि आफूलाई मान्छन् भन्थे । यो हामीले पनि देखेको कुरा हो । प्रसङ्ग केही वर्ष पछि को हो । लाहुरे मगरकी कान्छी छोरीको विवाह गर्ने कुरा आयो । त्यतिखेर केटीले पोखरामा पढ्थी प्रमाणपत्र तहको परीक्षा दिएकी थिई । ६वटी मध्ये सवैभन्दा धेरै पढेकी त्यही थिइ । अरु साक्षरमात्र थिए । साइलीले एसलसी फेल भए पछि फेरि जाच दिइन । लाहुरे मगरले बान्छी छोरीको विवाह धुमधामसग गर्ने भए । सँगै पढ्ने गाउको मगर केटासँग विवाह गर्ने भए पनि सवै तामझाम गर्ने भए । खास गरी बाहुन क्षत्रीको जस्तै बाजाबन्दुक सहित जन्ती ल्याउने अनि परम्परागत मगरविधि पनि त्यसमा मिसाउने भएछन् । यस्तो गर्दा सवैलार्इ हुन्छ भन्ने तर्क थियो । केटाले पनि लाहुरे मगरले भनेजस्तै जन्ती लाने भएछन् ।
हामी शिक्षकहरु दुवैतिरबाट आमन्त्रित भयौ । निहुरे सर तीनदिन देखि उही थिए । विवाहका दिन हामी जन्ती भएर गयौ । केटाको घर तल भएकोले पहिले माथि जानु उल्टो पनि पर्थ्यो । जन्ती घर नजिकै पुगे । हामी पछि थियौ । ज्वाँईहरुले डोला रोके भन्ने हल्ला भयो । हेर्न हामी अघि गयौ । लाहुरे मगरका ५ वटा ज्वाँईले छेकेका रहेछन् । छेक्ने शैली भने बढो नौलो र अचम्मको लाग्यो । ती पाचै जनाले कुकुरको जस्तै मेकअप गरेका थिए । सायद उनीहरुले पूरा कुकुरको छाला ओडेका थिए । पुच्छर कान लगायतका अङ्गहरु साच्चै कुकुरका जस्तै थिए । हातखुट्टामा पनि त्यस्तै छाला र नङ्ग्रा थिए । उनीहरुले चारहात खुट्टा टेकेका थिए । आवाज पनि कुकुरको जस्तै निकालेर घुमि –नाची रहेका थिए । उनीहरुको डोला – बाटो छेक्ने तरिका यस्तो रहेछ । यो तरिका मलाई अत्यन्त नौलो रोचक लाग्यो । अरु मानिसहरु शान्त थिए । कुकुर कराउदै र नाच्दै थिए । एकछिन पछि दुलहीतिरका एकजनामान्छेले उच्च स्वरमा भने अव जन्तीले बाटो खुलाउनु पर्‍यो । त्यसपछि दुलहातिरका दुईजनाले जाँडका दुईबटा घैटा र बटुका लिएर अघिसरे । अर्को एकजनले सुगुर र कुखुराको पकाएको मासुको भाडो लिएर आईपुगे । अव पाचैबटा कुकुरलाई मासुका चोक्टा बटुकामा राखिदिए । कुकुर भएकाहरुले नाच्दै खादै गर्नथाले र रक्सी चाही सुरुमा घैटाबाट धारा चुहाउने र उनीहरुले ठाडो घाटी लगाएर खानु पर्दो रहेछ । पछि त भाडो मै दिए । दुलाहा तिरकाले दिने र उनीहरुले खानेकाम लामो समयसम्म रह्यो । थाहा भयो उनीहरु टन्न अघाए पछि मात्र बाटो छाड्दा रहेछन । चाडै अघाएर बाटो छाड्दा पनि इज्जत रहदैन रे । यी बहादुर मानिदैनन् । त्यसो भएकोले समय लगाउदा रहेछन् । लामो समयसम्म नाच्दै खादै गरेर थाकेपछि बाटो छाडिदिए । त्यसपछि जन्तीघरमा पुग्यो । ज्वाँईहरु र दुलहा घरभित्र पसे । हामीलाई छुट्टै घरमा खानपिनको व्यवस्था रहेछ । खाए पछि केटीलाई स्कूलको तर्फबाट संयुक्त उपहार दिएर हामी फर्केऔँ। त्यस पछिको विवाह के कस्तो शैलीमा भयो थाहा भएन । निहुरे सर पर्सिपल्ट मात्र स्कूल आए । त्यस पछि भने उनले ससुरालीको बखान गर्न छाडे ।
प्रमोद खरेलको स्वरमा “फिर्ता गर मुटु मेरो” सार्वजनिक
डाईनामिक ग्लोवल एचआरका सञ्चालकहरु लाखौं ठगेर सम्पर्कविहीन
शेरबहादुरको ग्राण्ड प्रिमियर सम्पन्न, फिल्मलाई सबैबाट वाही वाही
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन(युएण्टो)को अध्यक्षमा शंकर अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । संगठनको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनले अधिकारीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गरेको हो ।…
पोखराको विजयपुर पुलमा शक्तिशाली बम बिस्फोट हुँदा दुई जना घाइते भएका छन्। बिहान ११ः५० बजे भएको बिस्फोटमा परी गण्डकी टेलिभिजनका संवाददाता धनश्याम पाण्डे र प्रहरी…
लमजुंगका दुई जना पुराना वाम नेताहरुलाई काठमाडौंमा अभिनन्दन गरिएको छ । लमजुंगमा वाम आन्दोलनको अगुवाको रुपमा स्थापित पुराना नेताहरु ऋषिराम पौडेल र पूर्णबहादुर गुरुंगलाई प्रजातन्त्र…